Deegaanka Manaas iyo Tuulooyin kale oo gacanta dowladda galay. | stn radio	Thursday, November 27th, 2014	Home
Deegaanka Manaas iyo Tuulooyin kale oo gacanta dowladda galay.
Feb 18, 2013 - Aragtiyood	Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan gobolka Bay ayaa deegaano gobolkaasi ka tirsan kala wareegay saacadihii ugu dambeeyey Xoogaga Xarakada Alshabaab.
Deegaanada Ciidamada dowladda ay la wareegeen waxaa ka mid ah Manaas iyo tuulooyin kale waxayna deegaankaasi iyo deegaano kale qabsadeen iyadoo aysan dhicin wax dagaalo ah, halka goobo kale ay ku qabsadeen dagaalo kooban.
“Ciidamada dowladdu waxay la wareegeen saacadihii ugu dambeeyey deegaano Xarakada Alshabaab ay kaga sugnaayeen gobolka” ayuu yiri mid ka mid ah Saraakiisha Maamulka gobolka Bay ee dowladda Soomaaliya.
Deegaanka Manaas oo ku dhow Magaalada Baydhabo aysan Ciidamada isgarabsanaya kala kulmin wax dagaalo ah, hase yeeshee deegaanada kale dagaalo ka dhacay ayaa la ogayn khasaaraha uu dhaliyey.
Goobjoogayaal ku sugan Deegaanka Manaas ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalada ay ahaayeen kuwo kooban ayna hadda ku sugan yihiin gudaha deegaankaasi Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya.
Xarakada Alshabaab ayaa weli ka hadlin deegaanada iyo tuulooyinka gacantaooda laga bixiyey iyadoo Deegaanada gacantooda ka baxay ay ka dhigayaan deegaano gobolka Bay ku yaala ee laga qabsaday Xarakada Alshabaab.